बालुवाटारबाट धपाइएका सभामुखको दुःख ! – सत्य तथ्य र निष्पक्ष्य समाचारको लागि
३० मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वभौम संसदलाई बालुवाटारको छायाँजस्तै बनाएको आरोप प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुबैतर्फबाट लाग्दै आएको छ । उसोभए संसदको नेतृत्व गर्ने सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाचाहिँ के–कस्तो छ त ? संवैधानिक परिषदको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सभामुख सापकोटा यतिबेला चर्चामा आएका छन् ।
अन्ततः राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिम्सिना प्रधानमन्त्री निवासतिर लागे, सभामुखचाहिँ संसद भवनतर्फ लागे ।
सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपाने भन्छन्, “मंसिर २८ गते संघीय संसद सेवा दिवस २०७७ को पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अन्तरगत विहान ८ : ३० बजे संघीय संसद, सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक स्वयम् सभामुखले अध्यक्षता गर्नुभएकोले उपस्थित हुन नसक्नु भएको यस अघि नै जानकारी गराइसकिएको छ । स्मरण रहोस्, त्यस दिन विहान ९ बजे परिषद् बैठकमा उपस्थितिका लागि पत्राचार गरिएको थियो ।”
सभामुख सापकोटाले यति भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलेको भन्दा अलि मलीन स्वरमा भने, ‘ठीक छ ।’Source
Tags: बालुवाटारबाट धपाइएका सभामुखको दुःख !
Previous चिनियाँ रक्षामन्त्री जंगी अड्डामा दुई घण्टा
Next राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु : प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा एक स्वर